चुरे दोहनले दुखेको प्रथम राष्ट्रपतिको मन डाँडाकाँडामा डोजर चलेको देख्दा मन दुख्छ
दिनेश गौतम काठमाडौं, १३ फागुन
जहाँ जङ्गल छ, जहाँ डाँडो छ, त्यहाँ डोजर छ । जनकपुरमा २०३५ सालसम्म ४० फिटमा पानी निस्कन्थ्यो । अहिले ४ सय फिट खन्नुपर्छ !
काठमाडौंका खोलानालामा कलकल पानी बग्थ्यो । ढुंगेधाराको पानीले मान्छेका आँत भिज्थ्यो । अहिले कहाँ गए ढुंगेधारा ? कहाँ गए खोलानाला ?
हिमालमा हिउँका ढिक्का हुन्थे । आज पग्लिएर हिमाल नै नास हुने अवस्था भएको छ ।
‘हरियो वन नेपालको धन’ कतै उखानमा मात्र बाँकी रहने त होइन ?
चुरे जङ्गल फँडानिले तराई उजाडिन थालेको छ । जङ्गल फँडानीले तराईको त्यो उर्वर भूमि मरुभूमि बन्ने त होइन !
प्रकृतिले दिएको अनुपम सुन्दरतालाई जोगाउने कि नास गर्ने ? प्रकृतिलाई नै नास गरेर कस्तो विकास गर्ने ? वैज्ञानिक ढंगबाट किन विकास गरिएन ?
यसो भनिरहँदा प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव गम्भीर मुद्रामा देखिए ।
मध्य दिन । ललितपुरको बागडोल तुवाँलो, धुलो र धुँवाले छपक्कै छोपेको थियो । नेपालका प्रथम राष्ट्रपति यादव पनि बागडोलमै बस्छन् ।
बागडोलको अकाशमुनि मडारिएको तुवाँलो, धुलो र धुँवाले आकाशमै अनेक चित्र कोरिरहेको थियो । लाग्थ्यो, त्यो कुरूप दृश्य थियो– प्रदूषणले निम्त्याएको ।
वरिपरि रूखबिरुवा देखिनु त परको कुरा, हरियो देख्न काठमाडौं उपत्यकाको चार भन्ज्याङमा आँखा पुर्‍याउनुपर्ने । त्यो पनि तुवाँलो, धुलो र धुँवाले देख्नै मुस्किल ।
७८ वर्षीय यादवले साढे चार वर्षदेखि यही दृश्य देख्दै आएका छन् । डाइबिटिज, ब्लड प्रेसर र प्रोस्टेटले बेलाबेलामा उनलाई दुःख दिन्छ । तर, त्यसभन्दा बढी उनी देशको प्राकृतिक सौन्दर्य बिग्रँदै गएकामा दुःखी र चिन्तित छन् ।
सबेरै उनको निद्रा खुल्छ । नित्य कर्म गरेपछि एक घण्टा ‘मर्निङ वाक’मा निस्कन्छन् । प्रदूषणले आक्रान्त वातावरणमै उनको दैनिकी सुरु हुन्छ । त्यसपछि विद्वानहरूका किताब पढ्छन् । पत्रपत्रिका पढ्छन् । देशका विभिन्न ठाउँमा पुग्छन् । कहिले विद्यालय उद्घाटन त कहिले किताब विमोचनमा पुगिरहेका हुन्छन् उनी ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, वातवरणमा उनको चासोले उनलाई देशका कुइनेटाहरूसम्म तानिरहन्छ । आफ्नो बुढ्यौली र अस्वस्थतालाई केही क्षण उनी बिर्सिदिन्छन् यस्ता सामाजिक, वातावरणीय र शैक्षिक कार्यका लागि ।
उनी जहाँ पुग्छन्, ‘डाँडाकाँडामा डोजर, खोलानालामा क्रसर’ देखेर दिक्क बन्छन् । उदेकलाग्दो दृश्य उनको आँखामा ठोक्किन्छ र अत्यन्त दुखी बन्छन् उनी ।
हामीले सुरुमा उनको स्वास्थ्यबारे चासो राख्यौँ ।
‘कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था ?’
‘शल्यक्रियापछि ठीक छु’, उनले छोटो जवाफ दिए ।
‘तर देश घुम्दा दुखी हुन्छु’, उनले थपे ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थासँगै भौतिक विकासमा देश अगाडि बढेको छ । खुसीको सन्देश हो यो तर देशको भूबनावटअनुसारको व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले विकास भएको छैन । वैभवपूर्ण प्रकृति ईश्वरले दिएको छ तर यो प्रकृति आजका लागि मात्र होइन, पुस्तौँ पुस्तासम्म निरन्तरता दिनका लागि हो ।
प्रकृतिको सौन्दर्य पुस्तौँ पुस्तासम्म रहने गरी वैज्ञानिक ढंगबाट विकास गरेका छौँ त ?
पुर्खाले एउटा देश बनाए अनि शासन पद्धति स्थापना गर्न दशकौँसम्म लड्नुपर्‍यो हामीले । अहिले लोकतन्त्र आएको छ तर जनता अझै खुसी देखिँदैनन् ।
‘उन्नत संविधान बनाउन सकिन्थ्यो’
लोेकतान्त्रिक गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्थाको उच्चतम पद्धति हो । ७०–८० वर्षको लडाइँपछि संविधान बनेको छ । अझै उन्नत संविधान बनाउन सकिन्थ्यो । यद्यपि, संविधान उन्नत नभए पनि लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक छ । समावेसिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संघीयता सुनिश्चित गरेको छ ।
संविधान जारी गर्ने समयमा केही दल असन्तुष्ट । अहिले ती दल पनि संविधान मानेर निर्वाचनमा सहभागी भए । यो खुसीको कुरा हो । सबै दल मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अब विप्लव र किरणजीहरू पनि यसमा सहभागी हुनुपर्छ ।
आफैँले जारी गरेको संविधानप्रति केही असन्तुष्टिसँगै धेरै खुसी प्रकट गर्छन् उनी ।
‘अझै जनता खुसी देखिएनन्’
शीतल निवासबाट बागडोल सरेपछि उनी जिल्लाजिल्लामा जनताको माझमा पुगेका छन् । तर, जनताको मुहारमा उनी खुसी देख्दैनन् । जनताले जुन आशा गरेका थिए । त्यो राज्यबाट नभएको आभास गर्छन् । संविधानअनुसार ३ वटै सरकार बनेका छन् । जनताले राज्यसँग आशा गर्नु उनीहरूको अधिकार हो भन्ने लाग्छ यादवलाई ।
‘कतै विधिअनुसार राज्य नचलेको त होइन ?’, जहाँ गए पनि जनताले उनलाई यही प्रश्न गर्छन् ।
जनताको प्रश्नले उनलाई घोच्छ ।
कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका ओजपूर्ण निकाय हुन् । आफ्नो सीमाभित्र रहेर एकअर्कालाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ यी निकायले । एकले अर्कोलाई हस्तक्षेप नगरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव छ उनको ।
संवैधानिक संस्थाहरूलाई पौष्टिक आहार दिनुपर्छ, मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने यादवको राय छ । यसको अर्थ ऐन, कानुन राम्रो बनाउनुपर्छ । निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संस्थामा कहीँ कतैबाट हस्तक्षेप हुनुहुँदैन र योग्य व्यक्तिलाई ती निकायको नेतृत्व दिइनुपर्छ भन्ने हो रे !
‘अनि मात्र जनताले समान न्याय पाउँछन् । जनता खुसी र सुखी हुन्छन्’, उनको अभिभावकीय धारणा यसरी आयो ।
‘राजनीतिक नेतृत्व चुके’
अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको दल मात्र होइन, सबै राजनीतिक पार्टीहरू कतै न कतै चुकेका छन् । अहिलेका मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूले लोकतन्त्रका लागि लामो सङ्घर्ष गरेका छन् ।
तत्कालीन राजाले लोकतन्त्रको बारबार हत्या गरे । त्यसैले जनताले २००७, २०४६, २०६२ सालसम्म लोकतन्त्रका लागि लडे । राजालाई पनि फ्याले ।
अहिले जनता सार्वभौम भएका छन् । जनता देशका मालिक हुन् । राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । सामाजिक परिवर्तन विस्तारै हुन्छ । समाजलाई अग्रगामी बनाउने राजनीतिक दलले नै हो ।
दलहरूप्रति उनी बढी नै आशावादी देखिन्छन् ।
‘लोककल्याणकारी समाज आवश्यक’
लोककल्याकणकारी समाज बनाउने, देशको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्षको रक्षा गर्ने दलीय नेतृत्व र सरकारले नै हो । जनतामा आर्थिक, व्यावसायिक, न्यायिक विभेद हुन नदिने पनि राजनीतिक नेतृत्वले हो ।
तर, लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पनामा अहिलेको नेतृत्व चुकिरहेको त छैन ? यो प्रश्न आमप्रश्न बनेको छ यतिबेला ।
उनी स्वयम् पनि संशय व्यक्त गर्छन् अनि दल र सरकारलाई सचेत पनि गराउँछन् ।
राजनीति भन्दा पनि अहिले उनलाई देशको माटो र प्रकृतिको चिन्ता छ । अवैज्ञानिक तवरले जथावाभी विकास हुँदा देशको प्रकृति नै नास हुँदै गएको उनको दुखेसो छ ।
देशको सुन्दरता मेटिँदै गएको छ । यसले देशलाई दूरगामी असर गर्ने त होइन भन्नेमा उनी चिन्तित छन् ।
वन, जङ्गल, खोलानाला, ताल–तलैया, वन्यजन्तु, किट–पतङ्ग, जडिबुटीमाथिको दोहनले उनी अझ निराश देखिन्छन् ।
राजनीतिक कुरा छाडेर उनी प्रकृतिमै फर्किए ।
पर्यावरण र विकास
पर्यावरण र विकास एकअर्कासँग जोडिएका छन् । हाम्रो भूगोल ‘युनिक’ छ । हिमाल छ । संसारको उच्च शिखर सगरमाथा छ । पहाडमा महाभारत छ । चुरे पहाड छ । तराई छ । भारतको सीमादेखि चीनको सीमासम्म प्रकृतिले हामीलाई के दिएको छैन ?
जलको भण्डार, जडिबुटी, वन–जङ्गल, खोलानाला, बोट–बिरुवा, अनेकथरी जनावर, किट–पतङ्ग, चराचुरुङ्गी, कृषि फाँट, ताल–तलैया, फलफूल के छैन यहाँ ?
उनी नेपालको पूरै भूभागमा पुग्छन् एकछिन ।
‘आहा ! कस्तो सुन्दर छ नेपाल !’, अचानक यो वाक्य खुस्किन्छ यादवका मुखबाट ।
‘तर, आज जतातै डोजर र क्रसर !’, तुरुन्तै निराशामा परिणत हुन्छ उनको उत्साह र खुसी ।
सुन्दर नेपाल आज कुरूप बन्दै छ । चुरे पहाड, जहाँ घना जङ्गल र झाडी थियो । आज चुरेको तल्लो भूभाग सखाप भएको छ । वन्यजन्तुको आश्रयस्थल चारकोसे झाडी समाप्त हुँदै छ । वन्यजन्तुको करिडोर खोइ ? उता, पानीको मुहान सुक्दो छ । खोला, नदीनालामा क्रसर छिरेको छ ।
तराईको उर्वर भूमि मरुभूमीकरण हुन थालेको छ ।
पहिरोलाई आमन्त्रण गर्न पहाडको डाँडोमा डोजर पुगेको छ । सडक, एयरपोर्ट कहाँ बनाउनुपर्ने हो, कहाँ बन्दै छन् ?
देशको भूगोलअनुसार विकास भएको छैन । वैज्ञानिक विकास भएन । वातावरणमा कम क्षति हुने गरी किन विकास गर्न सरकारले चासो नदिएको हो ?
प्रश्नसँगै उनी स्तब्ध हुन्छन् ।
गणतन्त्रमा पनि चुरे दोहन
राणा, पञ्चायत हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि जङ्गल फँडानीको क्रम रोकिएको छैन । पञ्चायतमा सामुदायिक वनको अवधारणा आयो । यसले पहाडी क्षेत्रको वन जोगाउन सफल भयो तर तराईमा भने सफल हुन सकेन ।
पञ्चायतमा पूर्वराजा महेन्द्रको समयमा चुरेको चारकोसे झाडीबाट राजमार्ग बनाइयो । यसले गर्दा बसाइँसराइ, शहरीकरण बढ्यो । जङ्गलबाट कमाउन थाले । हुँदाहुँदै २०३७ सालमा वन खुला गरियो । त्यसपछि चुरे खोक्रो बन्दै गयो ।
कृषकका छोरा उनी । तिनै वनजङ्गल । पाखा पखेरामा सुस्केरा हाल्दै हुर्केका उनी । उनले आफ्नै जीवनकालमा घना र उजाडिएको जङ्गल देखे ।
सुस्केरा हाल्दै घना जङ्गल अनि पाखा, पखेरामा बाल्यकालमा हिँडेको दिन सम्झिन्छन् उनी ।
आजको उजाड जङ्गल देख्दा फेरि मौनता साँध्छन् यादव ।
बुहदल आएपछि चुरे फँडानी केही रोकियो तर माओवादी आन्दोलनपछि फेरि जङ्गल अतिक्रमण हुन थाल्यो । २०६३ सालसम्म आइपुग्दा चुरे जङ्गल सुख्खा हुन पुग्यो । अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा जङ्गल फँडानी हुने क्रम रोकिएको छैन । दोहन बढ्दो छ ।
तराई उर्वए भूमि थियो । स्वर्ग थियो । पानीको कमी थिएन । अन्नको कमी थिएन । फलफूलको कमी थिएन । सिमसार थियो । पोखरी थियो । माछा थियो ।
२०४० सालसम्म नेपालबाट अन्न निर्यात हुन्थ्यो । २०२४ सालसम्म पनि निर्यात गर्ने देशमा संसारको पाँचौँ नम्बरमा पथ्र्यो तर अहिले देशले आयातको भर पर्नुपरेको छ ।
कारण– वन–जङ्गल, नदी–नालको दोहन अनि अव्यवस्थित र वैज्ञानिक तवरले विकास नहुनु ।
विकासको नाममा यसरी हुँदै छ विनास
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ६ लेनको बन्दै छ । यसले बाँकी रहेको तराईको जङ्गल र चुरेको जङ्गल नास गर्छ । पूर्व–पश्चिम रेलवे बन्दै छ । बन्नु पनि पर्छ पनि तर बनाउने कसरी ? एउटा राजमार्ग, अर्को रेलवे बनाउँदा वनको हालत के हुन्छ ?
त्यसको २५ किलोमिटिर तल धानको खेतमा हुलाकी राजमार्ग छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको २५ किलोमिटरमाथि मध्यपहाडी राजमार्ग बनिरहेको छ । अब ती क्षेत्रमा शहरीकरण हुन्छ । बजार बन्छ अनि पानीको मुहान सुक्छ । डोजर चलाएपछि पानीको मुहान के हुन्छ ? शहरीकरण र विकासका नाममा खेतीयोग्य जमिन मरुभूमि बनाउने ?
अहिले भइरहेको विकासप्रति आश्चर्य प्रकट गर्छन् उनी ।
झापादेखि डडेल्धुरासम्म चुरे भएर अर्को ४ लेनको राजमार्ग बनिरहेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमाथि ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ । १० हजार रूख कटान भइसकेको छ ।
यसले पहिरोको जोखिम बढेको छ । तराईको उर्वर भूमि डुबाउँछ । सरकारले यसको गहन अध्ययन किन गर्दैैैन ?
अनि राजमार्गमा हाईटेन्सन लाइन जान्छ । त्यसमा पनि रूख नै काटिन्छ । कम क्षति हुनेगरी कसरी बनाउने ? यसरी वन–जङ्गल र सीमासार क्षेत्र नास हुँदा वन्यजन्तुको आश्रयस्थल के हुन्छ ?
निकै भावुक बन्छन् उनी ।
‘प्रतिष्ठित नेताको नामलाई बदनाम गर्नुहुन्न’
सरकारले प्रतिष्ठित नेताको नाममा चुरे भएर राजमार्ग बनाउँदै छ । यसरी वन नै नास गरेर प्रतिष्ठित नेताहरूको नाममा राजमार्ग बनाउँदा के हुन्छ ? जनताले दुःख पाए भने स्वर्गमा पनि प्रतिष्ठित नेताको आत्मा रुन्छ ।
उनी सरकारलाई सचेत गराउँछन् ।
पर्यावरणको सन्तुलन कायम गरेर विकास गर्नुपर्ने हो । विश्वमा तापक्रम बढेको छ । यस्तो समयमा जङ्गलको महत्त्व कति हुन्छ ? विश्वको समस्या एकातिर छ अनि हामीले आफ्नै वन नास गर्दा भोलि के हुन्छ ?
घना जङ्गल फँडानी हुँदा हात्ती, गैँडा हरेक प्रकारका जनावर गाउँ पस्न थालेका छन् । गाउँमा हात्ती र बँदेलले उपद्रो मच्चाएका छन् । तिनको वासस्थान सखाप भएपछि गाउँ नपसेर कहाँ जाने ?
पानीको मुहान ‘ड्यामेज’
राजमार्ग क्षेत्रमा पानीको अभाव हुन थालेको छ । हिजो चारकोसे झाडीले पानी सोसेर राखेको थियो । आज झाडी छैन अनि पानीको मुहान सुकेको छ । प्रदूषणले तापक्रम बढाएको छ । पहिले तराईमा ३७ डिग्रीभन्दा माथि तापक्रम हुँदैनथ्यो । अहिले ४३ भन्दा माथि पुग्न थालेको छ ।
ओहो ! वन फडानी रोकेन भने झन् के होला ? उनको कुरा सुन्दा साँच्चिकै घोत्निल बाध्य बनाउँछ ।
तराईमा मात्र होइन, काठमाडौंमा समेत असर परेको छ चुरे दोहनको । ऊबेलाको ठन्डा काठमाडौं । जतातै कलकल पानी आउने ढुंगेधारा । काठमाडौं खेती योग्य थियो । अन्नको भण्डार थियो ।
तर, आज अहिले तापक्रम बढ्दो छ । खोइ काठमाडौंका ती ढुंगेधारा ? चन्द्रागिरि भत्काइरहेका छौँ । डाँडाकाँडा भत्काउँदै गएका छौँ ।
२०२२ सालमा झोँछेमा बस्दाका दिन उनी सम्झन्छन् । त्यसबेलाको सुन्दर काठमाडौं उनको मानसपटलमा अहिले पनि घुमिरहन्छ । यादगार छन् सुन्धाराको ढुंगेधारामा स्नान गरेका ती दिन ।
‘निजगढ विमानस्थलमा पनि अध्ययन भएन’
अहिले निजगढ विमानस्थल पनि चर्चामा छ । गहन अध्ययन गरेर बनाउनुपर्ने हो त्यो । ३ किलोमिटर पूर्व लगेर बनाउन पनि सकिन्छ । सँगै पर्सा निकुञ्ज र चितवन निकुञ्ज जोडिएका छन् ।
त्यहाँ हात्ती, एक सिङ्गे गैँडा छन् । निजगढको जङ्गलमा १ सय २३ प्रजातिका दुर्लभ बिरुवा छन् । २३ प्रकारका स्तनधारी छन् । ५ सय फूलका प्रजाति छन् । जर्मनीको पूरै क्षेत्रमा जति फूल पाइन्छन्, त्यति त नेपालको निजगढदेखि चितवनसम्म पाइन्छन् । एयरपोर्ट बनाउन २५ लाख रूख काट्दा के हुन्छ ?
सोचमग्न हुन्छन् उनी ।
जहाँ जङ्गल, जहाँ डाँडो, त्यहाँ डोजर !
पहाड कुन देशमा छैन ? अमेरिका, युरोप, जापान, चीनलगायतका विकसित देशमा पनि पहाड छन् । तर, त्यहाँ कसरी विकास भएको छ, अध्ययन अनुसन्धान किन हुँदैन ?
पाल्पामा १२ वटा डाँडाबाट चुनढुंगा निकालिँदै छ अनि कसरी पर्यटक त्यो ठाउँमा पुग्छन् ? कहाँबाट कति चुनढुंगा खन्ने हो, त्यसको अध्ययन खोइ ? जहाँ जङ्गल छ, जहाँ डाँडा छ, त्यहाँ डोजर पुर्‍याउने मात्र विकास हो ?
कस्तो विकासको कल्पना गरेका छौँ ? सोच्नुहोस् त !
अवाक् बन्छन् यादव ।
भ्यागुतोसमेत देख्न छाडियो
चुरेभन्दा तलको चारकोसे झाडी थियो । त्यससँगै पोखरी, नदीनाला, माछा र भ्यागुता हुन्थे । अहिले भ्यागुता, सर्पसमेत देखिँदैनन् ।
खेतहरूमा केमिकल छरेर सबै किट–पतङ्ग नास भएको छ । यसले पर्यावरणमा असर गरेको छ । नेपालको १७ प्रतिशत भूमि तराईमा पर्छ । ६० प्रतिशत जनता तराईमा बस्छन् ।
‘अव्यवस्थित विकासले मानवमा कस्तो असर पर्छ ?’, उनी प्रश्न गर्छन् ।
सुन्दर देश नेपालसँग विश्वको ०.०३ प्रतिशत भूमि छ । यही भूमिमा ७७ प्रतिशत जलको भण्डार छ । २३ प्रतिशत जमिनको भाग छ । चीन हामीभन्दा ६६ गुणा ठूलो छ । भारत २२ गुणा । तर, फूलको प्रजातिमा चीन ६ गुणा र भारत ३ गुणा ठूलो छ । क्षेत्रफलमा ठूलो भएका देशभन्दा फूलको प्रजातिमा नेपाल ठूलो छ ।
आकारमा सानो भए पनि प्राकृतिक सौन्दर्यले विश्वकै धनी देश हो नेपाल ।
उनी गर्वबोध गर्छन् आफ्नो देशप्रति ।
तर, आज तिनै देशबाट वस्तु आयात गर्नुपरेकामा पीर छ उनलाई ।
डा. यादवले हरेक दिन नेपालले कति के आयात गरिरहेको छ भनेरसमेत टिपोट गरेर राखेका रहेछन् ।
एकपछि अर्को टिपोट सुनाउँदै गए ।
फलफूल ५ अर्ब, पुष्पजन्य बोट बिरुवा १३ करोड ९० लाख, प्याज २ अर्ब, लसुन २३ करोड, आलु १ अरब ३९ करोड, हरियो तरकारी १६ करोड १० लाख, टमाटर ४ अर्ब ३२ करोड ८९ लाख, कागती १९ करोड रुपैयाँको आयात गरिरहेका छौँ ।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन् ।
उनले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तथ्याङ्कसमेत सुनाए ।
‘हिजो विश्वमा निर्यात गर्नेको ५ नम्बरमा पर्ने देश आज आयातको भरमा !’, उनी घोत्लिन्छन् ।
‘खेती नै हुँदैन’
देशको अर्थतन्त्रको आधार कृषि हो तर आज खेती नै हुँदैन । कारण– पानी छैन । पहिले जुन समयमा पानी पर्नुपर्ने हो, त्यही समयमा पथ्र्यो तर अहिले कहिले पानी बढी पर्ने, कहिले पर्दै नपर्ने त कहिले खडेरी अनि कसरी खेती हुन्छ ?
कृषिप्रधान देश भएर पनि उखुका कृषक चिनी मिल मालिकबाट पैसा नपाएर धर्ना बस्नुपर्छ । यो विडम्बना होइन ? अर्कोतर्फ काम गर्ने जनशक्ति अरबतिर छन् । अरबबाट आएको रेमिट्यान्स सबै आयात गर्दा उनीहरूकै देशमा फर्किन्छ ।
अनि चुरे संरक्षण अभियान
चुरे विनास रोक्न उनी राष्ट्रपति भएको समयमा ‘चुरे संरक्षण समिति’ बनाइयो । समितिले योजना पनि बनायो । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले यसलाई पास गरेको थियो ।
तर, त्यसपछि दराजमा थन्क्याएर राखिएको छ उक्त योजना । कानुन बनाउनुपर्ने हो, अहिलेसम्म बनेको छैन । कानुन नबनेकाले चुरे संरक्षण सोचेअनुसार हुन सकेको छ्रैन । केन्द्रले, प्रदेशले वा स्थानीय कसले हेर्ने हो ? थाहा नभएको बताउँछन् यादव ।
उनी कानुनको प्रतीक्षामा छन् ।
संरक्षण कसरी गर्ने ?
माफिया पस्ने दुलो बन्द गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । चुरे खन्ने माफियालाई संसदमा, प्रेदश र स्थानीय तहमा पुर्‍याउनुहुँदैन । सही मान्छे चुनावमा उठ्ने हो भने र कानुन बनाएर काम गर्ने हो भने वन–जङ्गल हरियाली बनाउन र चुरे दोहन रोक्न समय नै लाग्दैन ।
वन–जङ्गल फँडानी, नदीनला दोहन रोकिनेमा उनी आशावादी भने छन् ।
शिक्षा, स्वस्थ्को अवस्था पनि उस्तै
शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि नाजुक छ । अहिले पनि ८० प्रतिशत बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमै पढ्छन् । २० प्रतिशत निजीमा पढ्छन् । २० प्रतिशतले राम्रो शिक्षा पाउँदैमा देश बन्दैन । ८० प्रतिशत राम्रो भएन भने संसारको बजारमा जान सकिँदैन अनि जाने खाडी मुलुकमै होइन ?
राम्रो नारा दिएर मात्र हुन्न । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरिनुहुन्न । त्यसैले ३ तहकै सरकार यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचारको अन्त्यले नै लोकतन्त्र बलियो बनाउँछ ।
देशको माटोको माया उनी यसरी दर्शाउँछन् ।
‘कृषकको घरमा जन्मिएँ । मेडिकल पढेँ । लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट देशको प्रथम राष्ट्रपति भएँ । देश, विदेश घुमेँ तर देशका डाँडाकाँडामा डोजर चल्दा, वन–जङ्गल विनास भएको देख्दा दुःख लाग्छ’, डा. यादव कुराकानीको अन्त्यमा पनि त्यही कुरामा चिन्ता जाहेर गर्छन्, जसका लागि उनी वर्षौंदेखि लागिपरेका छन्, ‘यसबाट खुसी मिलेको छैन । अब कानुन बनेर फेरि चुरे हरियाली भएको देख्न पाइयोस् ।’
उनमा आशासँगै आशंका पनि उत्तिकै छन् तथापि मुसुक्क मुस्कुराउँछन् ।
सायद उनी आफ्नो अभियानमा सफल हुने विश्वासमा छन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १३, २०७६, १२:३१:००